Kedu ihe kpatara ịhọrọ anyị
U-panel akpa FIBC
Akpa FIBC okirikiri
Akpa FIBC ventilasị
Akpa UN FIBC
1 & 2 loop akpa FIBC
Akpa B FIBC akpa
Ụdị akpa C FIBC
Ụdị akpa FI FI
Polypropylene U-udi FIBC nnukwu akpa
Cross cross loops tubular FIBC jumbo akpa
Akpa akpa FIBC gbara ume maka agwa nduku na log
Ụdị D FIBC nnukwu akpa nwere antistatic dissipative fa ...
Akpa tonnage FIBC nke mba ụwa
Akpa akpa FIBC:
Akpa Ton, nke a makwaara dị ka akpa ibu na-agbanwe agbanwe, akpa akpa, akpa oghere, wdg, bụ nnukwu nnukwu akpa, bụ ụdị ngwa ngwa, nwere crane ma ọ bụ ndụdụ, nwere ike nweta njem njem.
U-panel akpa FIBC:
A na-eji akpa anụ ahụ atọ arụ akpa FIBC U-panel, nke kachasị ogologo bụ ala na abụọ nke ozo a na -adụnye ya na akụkụ ya abụọ ka ọ bụrụ nke abụọ nke ozo n'akụkụ ka ị nwee udi n'ikpeazụ. Akpa U-panel ga-ejigide akụkụ anọ mgbe ịbubasịrị nnukwu ihe, ka mma na-agbagha.
Ihe owuwu U-panel na-ejikarị loops dị mma maka ịkwanye ngwaahịa dị iche iche ma nwee nnukwu mbuli elu. It bụ a ewu ewu nke ukwuu maka ngwaahịa buru ibu. Akpa nnukwu U-panel dị maka ibuga ntụ ntụ, pellete, granular na flake nwere ibu dị n'agbata 500 ruo 3000kgs..
Njuputa dị elu, mwepu nke ala, ibuli loops na ngwa ahụ nwere ike nha na ịhazi dabere na ihe onye ahịa chọrọ.
Na nwa agbọghọ na -amaghị nwoke polypropylene a kpara akpa, Enwere ike imepụta nnukwu akpa dịka 5: 1 ma ọ bụ 6: 1 ka SWL dị ka GB/ T10454-2000 na EN ISO 21898: 2005
Akpa FIBC okirikiri:
A na -eji akpa akwa tubular ejiri akwa akwa tubular jiri akwa elu na ala kpuchie ya yana loops 4 na -ebuli elu. Ọdịdị okirikiri a dị mma dị ka nhọrọ na -enweghị njikọ maka ihe ndị dị mma, dị ka ọka wit, starch, ma ọ bụ ntụ ọka na ụlọ ọrụ nri yana kemịkalụ, ọrụ ugbo, ọrụ ịnweta & ụlọ na -eburu ihe ruru kilogram 2000. Ihe owuwu okirikiri na-ewepụ ihe ndị dị n'akụkụ, weta ihe akaebe ka mma na nsonaazụ mgbochi mmiri ma e jiri ya tụnyere ogwe 2 ma ọ bụ ogwe FIBC 4. Nhazi mkpọsa na -agbasa na -enye ohere ịnweta nnweta ndụdụ dị mfe.
Akpa tubular ga -etolite n'ụdị cyclical mgbe ịbubasịrị nnukwu ihe, mgbe ejiri ihe mgbagwoju anya kwadoo ya, ọ ga -edozikwa akụkụ anọ.
Site na polypropylene na-amaghị nwoke, akpa akpa nwere ike arụpụta dịka 5: 1 ma ọ bụ 6: 1 ruo SWL dị ka GB/ T10454-2000 na EN ISO 21898: 2005
Ihe dị n'ime akpa FIBC nnukwu akpa nwere pallet transportatio
Akpa FIBC dị egwu:
A na -eji akpa nkuku arụ akpa ndị na -eme mkpọtụ iji dochie akụkụ anọ ma ọ bụ akụkụ anọ ozugbo ha juputara na n'oge njem na nchekwa. A na -eme mkpọtụ nkuku iji mee ka ihe ndị ahụ eburu na -aga nke ọma banye na ntụzịaka niile, mana na -egbochi akpa ahụ ịgbasa na usoro a. Tụnyere akpa ndị na-adịghị agbagha, ha na-echekwa ebe nchekwa ma belata ọnụ ahịa njem site na 30%. Yabụ na ha bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa FIBC ndị a eburu na oghere pere mpe. Akpa akpa nwere ike ime ka ọ dabara na pallet, karịsịa na mbupu akpa, ebe ha na -ejigide ọdịdị nke mbụ ha. Tenwere ike iji ya bufe kemịkalụ, mineral, ọka na ihe ndị ọzọ n'ụzọ akụ na ụba na n'enweghị nsogbu.
Enwere ọtụtụ akpa akpa FIBC dị iche iche ma ị nwere ike họrọ akpa kwesịrị ekwesị dabere na ihe na ngwa. FIBC ndị kacha ewu ewu na-abịa na akpa jumbo 4, akpa jumbo U-na akpa jumbo okirikiri. Enwere ike iji ihe mgbagwoju anya were dụkọta ihe niile ka ha nwee ike nwee akụkụ anọ ya mgbe ejiri nnukwu ihe jupụta ya ka ọ dị mfe ịchekwa na ibufe.
Nnukwu akpa UN FIBC maka ihe dị ize ndụ
Akpa UN FIBC:
Akpa UN FIBC bụ ụdị nnukwu akpa a na -eji maka njem na ịchekwa ngwongwo dị ize ndụ ma ọ bụ nwere ike ịdị. A haziri akpa ndị a wee nwalee ya dịka ụkpụrụ siri dị na “Nkwado nke United Nations iji chebe ndị ọrụ pụọ n'ihe egwu dịka mmetọ na -egbu egbu, mgbawa ma ọ bụ mmetọ gburugburu ebe obibi wdg. ule, nwalee nnwale, nnwale nnwale, nnwale nnwale na nnwale akwa.
Otu ma ọ bụ abụọ loops akpa FIBC nwere isi ihe na -ebuli elu
1 & 2 loop akpa FIBC:
A na -eji akpa tubular na akwa okirikiri eriri akpa FIBC otu ma ọ bụ abụọ mee ihe yana otu ihe na -ebuli elu otu ma ọ bụ okpukpu abụọ n'elu akwa tubular. Ebe ọ bụ na enweghị akwa kwụ ọtọ, ọ na-ekwe nkwa nsonaazụ ka mma nke mgbochi iru mmiri na ịgbapụta mmiri. Enwere ike iji aka uwe nwere agba dị iche iche wee kechie isi ihe na -ebuli elu.
Tụnyere 4 loops nnukwu akpa nke imewe yiri ya, enwere ike belata ibu akpa ruo 20% nke na-eweta oke arụmọrụ-ọnụ ahịa ka mma.
Otu akpa akpa abụọ ma ọ bụ abụọ dị mma maka iji nkò na -ebuli kreenu. Enwere ike ibuli otu nnukwu akpa ma ọ bụ karịa n'otu oge ma e jiri ya tụnyere akpa 4 loops nnukwu akpa nke na -adịkarị mkpa forklift na naanị otu akpa ka a na -edozi otu oge.
A na -eji akpa buru ibu 1 & 2 loop buru ibu na -ebu n'etiti 500kg na 2000kgs. Ọ bụ usoro njikwa njikwa ọnụ ahịa dị oke ọnụ maka imeju, bufee na ịchekwa ụdị nnukwu ngwaahịa dị iche iche, dị ka nri anụmanụ, resins plastik, kemịkalụ, mineral, cements, ọka wdg.
Enwere ike ijikwa nnukwu akpa 1 & 2 site na ndochi akwụkwọ yana usoro ndochi akpaka na ụdị mpịgharị
Akpa FIBC ventilasịrị:
A na -arụpụta akpa FIBC ventilashị iji hụ na mgbasa ikuku na -ebufe ka ọ na -ebuga n'enweghị nsogbu dịka poteto, eyịm, agwa na osisi osisi wdg, nke chọrọ ikuku dị mma iji dowe ọnọdụ kacha mma. Akpa buru ibu nwere ike inye aka idowe ọdịnaya n'ime mmiri dị ala nke na -enyere aka idobe ngwaahịa ọrụ ugbo maka ịdị ọhụrụ. Site na loops anọ na -ebuli elu, enwere ike ibu nnukwu ihe site na iji ụgbọ elu forklift na crane.
Dị ka ụdị nnukwu akpa ndị ọzọ, enwere ike ịchekwa FIBC nke ikuku ventilashị nke dị n'èzí n'okpuru ìhè anyanwụ.
N'ihi 100% polypropylene na -amaghị nwoke, akpa ikuku nwere ike idozigharị ma megharịa ya.
Ndị otu ọkachamara nwere ike nyere aka chepụta nha kwesịrị ekwesị dabara na ngwaahịa gị.
Pịnye akpa B FIBC nnukwu akpa nwere ihe mgbochi antistatic
Ụdị B FIBC akpa:
Pịnye B FIBC sitere na polypropylene na-amaghị nwoke gbakwunyere ihe ọkụ eletrik na-egbochi static nke nwere obere mgbada ọkụ iji gbochie omume ike dị ukwuu, yana ihe mgbapụta ahịhịa na-agbasa (PBD).
FIBC ụdị B yiri akpa nnukwu akpa n'ihi na ejiri polypropylene nwere akwa dị larịị ma ọ bụ ihe ndị ọzọ anaghị arụ ọrụ. Yiri nke nnukwu akpa A, akpa nnukwu akpa B enweghị usoro ọ bụla maka ịgbasa ọkụ eletrik.
Naanị uru dị na ụdị A bụ na a na -eme akpa nnukwu ụdị B nke ihe ndị nwere obere mgbada ọkụ iji gbochie omume ike na -agbapụta na -agbapụta ahịhịa (PBD).
Ọ bụ ezie na ụdị B FIBC nwere ike igbochi PBD, a naghị ele ha anya dị ka FIBC ndị na -emegide onwe ha n'ihi na ha anaghị agbasasị ebubo electrostatic na mwepu ahịhịa nkịtị ka nwere ike ime, nke nwere ike mụnye vapors na -ere ọkụ.
A na -ejikarị FIBC ụdị B ebufe akọrọ, ntụ ntụ na -enwu ọkụ ebe enweghị ihe mgbaze ma ọ bụ gas dị gburugburu akpa.
Ekwesighi iji ụdị B FIBCs ebe ikuku na -ere ọkụ nke nwere obere mgbanye ọkụ ≤3mJ dị.
Pịnye C FIBC nnukwu akpa ya na eriri eriri njikọ ụwa
Pịnye C FIBC akpa:
nke a maara dị ka FIBC na-eduzi ma ọ bụ FIBC nwere ike ime ala, sitere na polypropylene na-anaghị arụ ọrụ jikọtara ya na yarn na-eduzi, na-adịkarị n'usoro grid. A ga -ejikọ eriri ndị na -eduzi ọkụ eletrik ma jikọọ ya na ebe njikọta ala ma ọ bụ ihe njikọta ụwa n'oge arụ ọrụ na -arụ ọrụ.
A na -enweta njikọta nke yarn na -eduzi n'ime akpa niile site na ịkpa akwa na ịkwa akwa nke akwa. Dị ka ọ dị na ọrụ ntuziaka ọ bụla, ịhụ na njikọta na ịtọ ntọala ụdị C FIBC dabere na njehie mmadụ.
A na -ejikarị ụdị C FIBC eme ihe maka ịkwakọba nnukwu ihe dị ize ndụ na gburugburu ọkụ. N'oge usoro ijupụta na ịwụsa, Cdị C FIBC nwere ike hichapụ ọkụ eletrik na -agbanwe agbanwe ma nyere aka zere mmebi nke ịgbapụta ahịhịa ahịhịa na -agbawa agbawa na ọbụna mgbawa na -ada n'ala mgbe niile.
A na -eji akpa nnukwu ụdị C ebufe ngwongwo ndị dị ize ndụ dị ka kemịkal, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ha nwere ike ibuga ntụ ntụ na -enwu ọkụ mgbe ihe mgbaze na -ere ọkụ, vapors, gas ma ọ bụ ntụ na -ere ọkụ na -adị n'akụkụ akpa.
N'aka nke ọzọ, ekwesighi iji ụdị C FIBC mgbe ebe njikọ njikọ njikọta (gound) adịghị ma ọ bụ mebie.
Pịnye akpa D FIBC nwere akwa disistatic disistatic
Ụdị D FIBC akpa:
A na -eme ụdị D FIBC site na akwa antistatic ma ọ bụ nke na -agbasasị iji gbochie ihe ọkụ na -enwu enwu, mwepu ahịhịa na ịgbasa ahịhịa ahịhịa na -enweghị mkpa njikọ sitere na FIBC ruo ala/ụwa n'oge usoro ijupụta na ịwụsa.
Akpa buru ibu ụdị D na-ejikarị akwa Crohmiq na-acha ọcha na-acha anụnụ anụnụ iji mepụta akwa nwere eriri na-eme ka ọkụ eletrik na-apụ apụ na ikuku n'enweghị nsogbu ọ bụla. A na -eji akpa nnukwu ụdị D na -ebufe ihe na -ere ọkụ na ihe mgbawa n'enweghị nsogbu wee jikwaa ha na gburugburu ọkụ. Ojiji akpa D ụdị nwere ike iwepu ihe egwu nke njehie mmadụ jikọtara ya na imepụta na ojiji nke ụdị C FIBC nke nwere ike ime ala.
A na -eji akpa nnukwu ụdị D maka ebufe ngwongwo ndị dị ize ndụ dị ka kemịkal, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ha nwere ike ibuga ntụ ntụ na -enwu ọkụ mgbe ihe mgbaze na -ere ọkụ, vapors, gas ma ọ bụ ntụ na -ere ọkụ na -adị n'akụkụ akpa.
Mpaghara mmepe Gaoxin nke Jimo, China
Ngwaahịa na -ekpo ọkụ
Nnukwu akpa Fibc, Akpa Jumbo Fibc, Nkwakọ ngwaahịa Fibc, Ụdị akpa Fibc, Akụ Fibc Akụkụ, Pp akpa Fibc,